जापान मा यातायात! जापान रेल पास, शिन्कानसेन, एयरपोर्टहरू आदि - Best of Japan
जापान मा यात्रा गर्दा तपाईं shinkansen (बुलेट ट्रेन), हवाइजहाज, बस, ट्याक्सी, कार भाडा आदि संयोजन गरेर धेरै कुशलतासाथ अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले आफ्नो यात्रामा Shinkansen सवारी जोड्नुभयो भने, यो रमाईलो स्मृति हुनेछ। त्यो अवस्थामा, "जापान रेल पास" खरीद गर्न धेरै उचित हुनेछ। यस पृष्ठमा, म उनीहरूको सिंहावलोकन प्रस्तुत गर्नेछु। यो पृष्ठ धेरै लामो छ। यदि तपाइँ प्रत्येक आईटममा "शो" बटन क्लिक गर्नुहुन्छ, विस्तृत लुकेका सामग्रीहरू प्रदर्शित हुनेछन्। सामग्री को तालिका को लाभ उठाउन गर्नुहोस्। तपाईं यस पृष्ठको तल दायाँ तिर एरो बटन थिचेर शीर्षमा फर्कन सक्नुहुनेछ।
"जापान रेल पास" को आधिकारिक वेबसाइट। यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यो एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ
छवि क्लिक गर्नाले यो नक्शालाई छुट्टै पृष्ठमा जापान रेल पासको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रदर्शन गर्दछ
यदि तपाईं जापान भित्र JR ट्रेनहरू जस्तै Shinkansen को उपयोग गरेर जापान भित्र यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं प्रस्थान हुनु अघि "जापान रेल पास" खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। जापान रेल पास (जसलाई सामान्यतया JR Pass पनि भनिन्छ) एक धेरै लागत प्रभावी रेल पास छ जुन जेआरले विदेशी पर्यटकहरूको लागि प्रस्ताव गर्दछ। तपाईं जेआरको शिन्कानसेन र नियमित एक्सप्रेस आदिमा धेरै सवारी गर्न सक्नुहुन्छ।
जापान रेल पासको मूल्य, उदाहरणका लागि, प्रति व्यक्ति ,33,000 7,००० येन (days दिन, साधारण कार प्रकार)। जापानमा, टोकियो र ओसाका बीच शिन्कन्सेनमा पछाडि जान एक व्यक्तिलाई २ 28,000,००० येन लाग्छ। यदि तपाइँ धेरै JR प्रयोग गर्नुहुन्छ, जापान रेल पास तपाइँको शक्तिशाली "मित्र" बन्नेछ।
जापान रेल पासको सूची तल छ। 6-11 वर्षका बच्चाहरू 50% बन्द छ। Years बर्ष भन्दा मुनिका बच्चाहरु जापान रेल पास संग वयस्कहरु संग नि: शुल्क सवारी गर्न सक्छन्।
प्रकार साधारण (अर्थव्यवस्था) हरियो कार (प्रथम श्रेणी)
यद्यपि जापान रेल पासको साथ तपाईं केहि शिन्कानसेन रेलहरूमा सवारी गर्न सक्नुहुन्न ("Nozomi" र "Mizuho")। साथै, जापान रेल पास प्रयोग गर्दा, Shinkansen टिकट अग्रिम आरक्षित गर्न गाह्रो छ। यदि तपाइँ नयाँ वर्षको छुट्टिहरूमा यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो कि शिन्कानसेन धेरै भीडको रूपमा रहेको छ भने, यो एक विफलता हो जुन तपाईं अग्रिम बुक गर्न सक्नुहुन्न। त्यसोभए, कृपया जापानमा लिनुहोस् कि जापान रेल पास तपाईंको यात्राको लागि उपयुक्त छ।
म तल जापान रेल पासको विवरण प्रस्तुत गर्दछु। यदि तपाईं जापान रेल पासमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, कृपया तल "शो" बटन क्लिक गर्नुहोस्। त्यसो भए विस्तृत सामग्री प्रदर्शित हुनेछ।
शो: विस्तृत सामग्री हेर्न कृपया यो बटन क्लिक गर्नुहोस्
जापान रेल पास कसरी प्रयोग गर्ने
जापान रेल पास विदेशीहरू जो जापानमा छोटो अवधिको लागि जापान भ्रमण गर्ने उद्देश्यका लागि र केहि विदेशी जापानी जापानीहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो निम्न प्रक्रियामा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
प्रस्थान अघि भाउचर खरीद गर्नुहोस्
सर्वप्रथम, कृपया तपाईंको देशमा जापान रेल पासको लागि भाउचर किन्नुहोस्। यो ट्राभल एजेन्टहरू जस्तै कि JTB, JAL, एएनए आदि द्वारा खरीद गर्न सकिन्छ हालसालै, जापान रेल पास जापानमा समेत बेचेको छ, तर यो जापानमा अलि महँगो छ।
माथिको तालिकामा देखाइए जस्तै जापान रेल पासमा केही प्रकारहरू छन्।
हरियो कार (प्रथम श्रेणी), साधारण कार (अर्थव्यवस्था)
--दिन, १--दिन, २१-दिन
जापान रेल पास जापान भर मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
जापान मा जापान रेल पास प्राप्त गर्नुहोस्
तपाईं जापान जानुहुँदा सधैं एक भाउचर ल्याउनुहोस्। र कृपया भौचर र जापान रेल पासलाई JR को मुख्य स्टेशनको काउन्टरमा साटासाट गर्नुहोस्। त्यस समयमा तपाईलाई आफ्नो राहदानी प्रस्तुत गर्न भनियो।
>> कृपया जापान रेल पासको विनिमय बिन्दुहरूको लागि यहाँ सन्दर्भ गर्नुहोस्
Book Shinkansen इ।
जब तपाईं जापान रेल पास प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईं JR स्टेशनमा Shinkansen जस्ता नामित टिकटहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं जापान रेल पास प्रस्तुत गर्नुहुन्छ "मिडोरी नो माडोगुची" काउन्टरको साथ, तपाईं यसलाई कुनै अतिरिक्त शुल्क बिना प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं सित्तै सिट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं बस टिकट गेटमा जापान रेल पास देखाउँनुहुन्छ। थप रूपमा, तपाई JR का विभिन्न ट्रेन र बसहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जब तपाईं रेलमा सवारी गर्नुहुन्छ, कृपया तपाईंको जापान रेल पास टिकट गेटमा स्टेशन स्टाफलाई देखाउनुहोस्।
अंक जापान रेल पास प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोस्
जब तपाईं जापान रेल पास खरीद गर्नुहुन्छ, कृपया निम्न नोट गर्नुहोस्।
त्यहाँ Shinkansen लाइनहरु कि सवारी गर्न सक्दैन
जब तपाईं जापान रेल पास प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईं "Nozomi" (टोकियो स्टेशन - Hakata स्टेशन) र "Mizuho" (शिन ओसाका स्टेशन - कागोशिमा Chuo स्टेशन) प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
"Nozomi" र "Mizuho" सबै भन्दा छिटो Shinkansen हो, त्यसैले चार्ज अलि बढी छ। अझै पनि सबै समय भीड। त्यसैले म केही हदसम्म जापान रेल पासमा बाहेक उनीहरूलाई बुझ्दछु। जे होस्, म विदेशबाट आएका अतिथिहरूलाई "Nozomi" मा जान चाहन्छु!
यस बीच, तपाईं जापान रेल पास द्वारा सब भन्दा छिटो तोहोकु / होक्काइडो शिन्कन्सेन "हायाबुसा" (टोकियो स्टेशन - नयाँ हाकोडेट होकुटो स्टेशन) मा जान सक्नुहुन्छ।
सबवे र निजी रेलहरू बाहेक
जहाँसम्म तपाईंसँग जापान रेल पास छ, तपाईं सबवे वा निजी रेलहरूमा सवारी गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईंले तिनीहरूलाई सवारी गर्नुभयो भने, तपाईंले अर्को पटक अर्को शुल्क तिर्नु पर्छ।
यदि तपाईं जेआर स्लीपर ट्रेन चलाउनुहुन्छ भने, तपाईंलाई पनि थप शुल्क चाहिन्छ।
अग्रिम आरक्षण गाह्रो छ
तपाईं जापान नआउन्जेल तपाईं जापान रेल पास प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। तपाईं केवल भौचर मात्र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस कारणले तपाई जापान जानु भन्दा पहिले मूल रुपमा तपाई शिन्कानसेन आदि ई-बुक गर्न सक्नुहुन्न।
Shinkansen अर्को अवधिमा धेरै भीड छ। Shinkansen टिकट सवारी पहिले एक महिना जारी गरियो। अर्को अवधिको लागि, यो एकै साथ रिलीजको साथ बेच्न सकिन्छ। त्यसो भए तपाईले धेरै भीड खाली सिट प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
जब Shinkansen विशेष गरी भीड छ
अप्रिल २th देखि मे 27th सम्म
अगस्त ११ देखि २० औं दिन
डिसेम्बर २th देखि जनवरी 28th सम्म
यदि तपाईं माथिको अवधिमा जापान भ्रमण गर्नुहुन्छ भने तपाईंले शिink्कनसेन टिकटहरू अग्रिम आरक्षण गर्नुपर्छ। यदि तपाइँ जापान रेल पास प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, प्रि-बुक कसरी गर्ने भन्ने बारे जानकारी संकलन गर्न राम्रो देखिन्छ।
जापान रेल पास प्रयोग गर्दा कसरी अग्रिम आरक्षण गर्ने
जेआरको शिन्कानसेन र नियमित एक्सप्रेसको सीमित एक्सप्रेस टिकटहरू बोर्डमा जानुभन्दा अघि एक महिनामा जारी हुन्छन्। भर्खर धेरै विदेशी सेवाहरूले तपाईंलाई यी टिकटहरू बुक गर्न अनुमति दिन सुरू गरिसकेका छन्।
यदि तपाइँ जापान रेल पास प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं मूल रूपमा अग्रिम बुक गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले जापानमा आइपुगे पछि आरक्षण गर्नु पर्छ। यद्यपि, केहि शिन्कानसेन र नियमित एक्सप्रेसको लागि, यदि तपाईंले जापान रेल पास प्रयोग गर्नुभयो भने पनि, तपाईं तल जेआर ईस्टको आरक्षण साइट प्रयोग गरेर अग्रिम बुक गर्न सक्नुहुनेछ।
>> JT पूर्वी जापान ट्रेन आरक्षण को आधिकारिक वेबसाइट को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
>> कृपया जापान रेल पास प्रयोग गर्दा यस पृष्ठमा पनि हेर्नुहोस्
म तलको शिन्कानसेनको विवरणमा यस साइटको परिचय दिनेछु।
रेल पास जुन सीमित क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ
जेआर प्रत्येक क्षेत्र को लागी धेरै कम्पनीहरु मा विभाजित छ। प्रत्येक कम्पनीले रेल मार्ग पनि प्रदान गर्दछ जुन आफ्नै क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं केहि इलाकामा मात्र यात्रा गर्नुहुन्छ भने यी रेल पासहरू अधिक उपयुक्त हुन सक्दछन्। बच्चा शुल्क जापान रेल पास जस्तो आधा मूल्य हो (केही केसहरूमा अधिक छुट)। प्रत्येक कम्पनीको पासको सामग्रीहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ। भर्खरको जानकारीको लागि कृपया तलका लिंकहरूबाट आधिकारिक वेबसाइट जाँच गर्नुहोस्।
प्रकार सामान्य हरियो कार
लचिलो days दिन 22,000 येन 27,000 येन
"फ्लेक्सिबल days दिन" एक प्रकार हो जुन १० दिनको वैधता अवधि भन्दा days दिनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
>> होक्काइडो रेल पासको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
JR ईस्ट पास
तोहोकु क्षेत्र 19,000 येन
तपाईं यो पास कुनै पनि this दिनमा १ use-दिन अवधिको बीच जापानमा खरीद वा विनिमयको मितिबाट सुरू गर्न सक्नुहुनेछ। यो पास साधारण कारका लागि मात्र हो। यो टोबु रेलवेको सीमित एक्सप्रेस जस्ता केही निजी रेलवेहरूसँग पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं जापानमा खरीद गर्नुहुन्छ भने यो थोरै महँगो छ।
>> JR ईस्ट पासको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
टोकियो-ओसाका होकुरीकू आर्च पास
जेआर पूर्व र जेआर पश्चिमले संयुक्त रूपमा टोकियो प्रदान गर्दछ - ओसाका होकुरीकू आर्च पास। टोकियो-ओसाका होकुरिकु आर्च पास टोकियो र ओसाका वरिपरि घुम्न जाने मानिसहरूका लागि हो जुन जापानको समुद्री छेउमा होकुरीकु शिन्कानसेन प्रयोग गर्दै छन्। यो पास प्रयोग गरेर, तपाईं सवारी गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरण को लागी, नरिता एक्सप्रेस नियमित सीट तोकिएको सीट नरिता एयरपोर्ट र टोकियो जडान गर्ने होकुरिकु एक्सप्रेस "थन्डरबर्ड" को नियमित कार नामित सीट। तपाईं "हरुका" साधारण कारको नि: शुल्क सिटहरूमा पनि सवारी गर्न सक्नुहुन्छ कन्साइ एयरपोर्ट र ओसाका जडान गर्ने। यदि तपाईंले जापानमा खरीद गर्नुभयो भने यस पासको लागि शुल्क पनि अलि बढी छ।
>> टोकियो-ओसाका होकुरीकु आर्च पासको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
टाकयामा-होकुरीकु क्षेत्र 14,000 येन
Alpine-Takayama-Matsumoto क्षेत्र 17,500 येन
Mt.Fuji-Shizuoka क्षेत्र 4,500 येन
JR सेन्ट्रलले माथिका चार प्रकारका पथहरू प्रदान गर्दछ। वैधता अवधि days दिन हो (केवल फुजी- Shizuoka क्षेत्र मात्र5दिन हो)। जे भए पनि, तपाईं एक्सप्रेस ट्रेन साधारण निःशुल्क सीटहरू र नियमित ट्रेनहरूमा चढ्न सक्नुहुनेछ। "Takayama / Hokuriku क्षेत्र" मा, "Ise · Kumano ak Wakayama क्षेत्र" तपाई seat पटक सम्म तोकिएको सीट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, र "Takayama / Hkuriku क्षेत्र" मा तपाई Hokuriku Shinkansen (Toyama - Kanazawa) मा पाउन सक्नुहुन्छ। प्रत्येक केसमा, टोकैडो शिन्कानसेनमा जानका लागि छुट्टै शुल्क चाहिन्छ। यदि तपाईंले जापानमा खरीद गर्नुभयो भने यस पासको लागि शुल्क पनि अलि बढी छ।
>> टुरिस्ट पासको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
JR पश्चिम रेल पास
कन्साई क्षेत्र २,२००-,,2,200०० येन १ दिन, २ दिन, Day दिन, Day दिन
कन्साई चौडा क्षेत्र 9,000 येन 5- दिनहरू
कन्साई-हिरोशिमा क्षेत्र 13,500 येन 5- दिनहरू
सान्यो- San'in क्षेत्र 19,000 येन 7- दिनहरू
कन्साई-होकुरीकु क्षेत्र 15,000 येन 7- दिनहरू
Hokuriku क्षेत्र 5,000 येन 4- दिनहरू
San'in-Okayama क्षेत्र 4,500 येन 4- दिनहरू
हिरोशिमा-यामागुची क्षेत्र 11,000 येन 5- दिनहरू
ओकायामा-हिरोशिमा-यामागुची क्षेत्र 13,500 येन 5- दिनहरू
जेआर वेस्टले नौ भिन्न पासहरू प्रस्ताव गर्दछ। यी पासहरू साधारण कारका लागि मात्र हुन्। विवरणहरूको लागि, कृपया तल आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। Shinkansen सहित केहि पास संग, तपाईं पनि सवारी गर्न सक्नुहुनेछ "Nozomi" "Mizuho" जुन तपाईं जापान रेल Pass साथ सवारी गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईंले जापानमा खरीद गर्नुभयो भने यस पासको लागि शुल्क पनि अलि बढी छ।
>> JR पश्चिम रेल पासको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
सबै SHIKOKU रेल पास
3 दिन ,9,000, ००० येन
JR Shikoku ले सबै SHIKOKU रेल पास प्रदान गर्दछ। यो पास साधारण कारको लागि मात्र हो। यस पाससँग तपाईं JR Shikoku (कोजीमा स्टेशन सहित) र तोसा कुरोशियो रेलवे सबै लाइनहरूमा नियमित सीटहरू र एक्सप्रेस वा साधारण ट्रेनको तोकिएको सीटहरूमा सवारी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आसा कोस्ट रेलवे, तकमात्सु कोतोइरा इलेक्ट्रिक रेलवे, आइयो रेलवे, तोसाडेनमा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले जापानमा खरीद गर्नुभयो भने यस पासको लागि शुल्क पनि अलि बढी छ।
>> सबै SHIKOKU रेल पासको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
JR क्यूशु रेल पास
सबै क्युशु क्षेत्र पास २,२००-,,15,000०० येन Day दिन, Day दिन
उत्तरी क्यूशु क्षेत्र पास २,२००-,,8,500०० येन Day दिन, Day दिन
शदर्न क्युशु क्षेत्र पास 7,000 येन3दिन
जेआर क्युशुले JR सबै SHIKOKU रेल पास प्रदान गर्दछ। यो पास साधारण कारको लागि मात्र हो। यस पासमा चार प्रकारका हुन्छन्, क्युशू समग्र रूपमा, उत्तरी क्यूशु, दक्षिणी क्युशु, फुकुओका। त्यहाँ तोकिएको संख्यामा प्रतिबन्धहरू छन् जुन तपाईं निर्दिष्ट टिकट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
>> JR सबै SHIKOKU रेल पासको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
>> टिप्पणी पृष्ठ यहाँ छ
>> फुकुओका वाइड पासको कमेन्टरी पेज यहाँ छ
"जापान रेल पास" को आधिकारिक वेबसाइट तल छ। पृष्ठको माथी दायाँ तिर भाषा छनौट गर्न एक बटन छ।
>> "जापान रेल पास" को विवरणहरूको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्।
शिन्कानसेन एक सुपर एक्सप्रेस हो जुन २०० किमी / घण्टा भन्दा अधिकमा चल्दछ। तोहोकु शिन्कानसेन जस्ता केही सेक्सनमा अधिकतम गति 200२० किलोमिटरमा पुगेको छ।
जापान मा, Shinkansen रेलवे नेटवर्क विस्तार हुँदैछ। कुल विस्तारित दूरी करीव 3000००० किमी छ। त्यहाँ ११० वटा स्टेशनहरु छन् जहाँ सबै बुलेट ट्रेन बन्द छ। र Shinkansen धेरै सही सेकेन्ड मा आयोजित कार्यक्रम अनुसार कार्य गर्दै छ।
अवश्य पनि, यदि तपाई लामो दूरीमा यात्रा गर्नुहुन्छ जस्तो टोकियोबाट सप्पोरोमा जानका लागि, तपाईले हवाईजहाजको अझ राम्रो प्रयोग गर्नु हुन्थ्यो। यद्यपि शिंकान्सेनले प्रमुख शहरहरूको केन्द्रमा स्टेशनहरू चाँडै र छिटो चलाउँदछन्। त्यसोभए, जब तपाईं टोकियोबाट क्योटो, ओसाका, सेन्दै आदिमा जानुहुन्छ, तपाईं शिंकान्सेन द्वारा आरामसँग छिटो अघि बढ्न सक्नुहुनेछ हवाईजहाजको प्रयोग भन्दा।
Shinkansen अग्रिम कसरी आरक्षित गर्ने
मैले पहिले नै भनेझैं शि Shकानसेनका लागि तोकिएको टिकट सवारी दिन भन्दा एक महिना अगाडि रिलीज हुनेछ। यदि तपाईं जापान जानु भन्दा पहिले तपाईंको देशमा इन्टरनेट प्रयोग गरेर अंग्रेजीमा शिink्कन्सेन बुक गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया निम्न दुई अनलाइन आरक्षणहरू प्रयास गर्नुहोस्। यद्यपि ती दुबैमा विभिन्न अवरोधहरू छन्।
JR पूर्वी रेल आरक्षण
>> JR पूर्व रेल आरक्षण को साइट यहाँ छ
>> कृपया यी नोटहरू पढ्नुहोस्
>> कृपया जापान रेल पास प्रयोग गर्दा यो पृष्ठ पनि पढ्नुहोस्
यो वेबसाइट प्रयोग गरेर, तपाईं Shinkansen को अग्रिम आरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि यस वेबसाइटमा तपाईं टोकैडो सान्यो शिन्कन्सेन, र क्युशु सिन्कानसेन बुक गर्न सक्नुहुन्न।
एकचोटि तपाईंले अग्रिम बुकिंग गर्नुभएपछि, तपाईंले टिकट बोर्डि day दिनको अघिल्लो दिन २१ बजे (जापान मानक समय) प्राप्त गर्नुपर्नेछ। जहाँ तपाईं टिकटहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ प्रमुख जेआर पूर्वी स्टेशनहरू, जेआर होक्काइडो स्टेशनहरू, र कानाजावा र तोयामा स्टेशनहरू जेआर पश्चिम क्षेत्रमा।
टोकैडो सान्यो Shinkansen आरक्षण अनुप्रयोग "EX"
>> यस अनुप्रयोग "EX" को टिप्पणी पृष्ठ यहाँ छ
जेआर सेन्ट्रल र जेआर वेस्टले "टोकैडो सान्यो शिन्कन्सेन रिजर्वेशन एप EX" प्रस्ताव गर्दछ जुन तपाईं टोकैडो सान्यो शिन्कन्सेन प्रि-बुक गर्न सक्नुहुन्छ। दुर्भाग्यवस, यस अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सकिने क्षेत्र सीमित छ। यो अनुप्रयोग हाल अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, सिंगापुर, ह Hongक Kong, मलेसिया, थाईल्यान्ड र ताइवानमा उपलब्ध छ। विवरणका लागि माथिको स्पष्टीकरण पृष्ठमा हेर्नुहोस्।
जापानमा Shnkansen टिकट कसरी बुक र खरीद गर्ने
यदि तपाईं जापानमा आइपुगे पछि शिन्कन्सेन टिकट बुक र खरीद गर्नुभयो भने, तपाईंले काउन्टरहरू जस्तै स्टेशनहरू र ट्राभल एजेन्सीहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ। जेआरको मुख्य स्टेशनहरूमा टिकट बिक्री कार्यालयहरू छन् जसको नाम "मिडोरी नो माडोगुची" हो (जसको अर्थ जापानीमा हरियो विन्डो) हो। तपाईं त्यहाँ किन्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ जापान रेल पास प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, कृपया हेर्नुहोस् यहाँ यस पृष्ठमा
त्यहाँ जेआर स्टेशनहरु काउन्टरहरु को लागी टिकट भेन्डि machines मेसिनहरु पनि छन्। यी टिकट भेन्डि machines मेशिनहरूको साथ, तपाईं अ English्ग्रेजीमा टिकट किन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं पहिले अंग्रेजी चयन गर्न बटन थिच्नुभयो भने। दुबै क्रेडिट कार्ड र नगद यी टिकट भेन्डि machines मेशिनहरूको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ कि माथिको YouTube भिडियो सहयोगी हुनेछ।
Shinkansen को विवरणको लागि कृपया तल मेरो लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
जापान मा, Shinkansen (बुलेट ट्रेन) को नेटवर्क फैलदै छ। शिन्कानसेन एक सुपर एक्सप्रेस हो जुन २०० किमि प्रति घण्टा भन्दा बढी छ। यदि तपाइँ शिink्कन्सेन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं जापानको प्रमुख शहरहरू बीच चाँडै सजिलै सार्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं हवाइजहाज प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईंले एयरपोर्टबाट जानु पर्छ, त्यसैले ...
जापानमा, JAL र सेनाले घरेलु एयरपोर्टहरू बीच नियमित उडानहरू सञ्चालन गर्दछ। थप रूपमा, धेरै सस्तो एयरलाइन्स (LCCs) प्रमुख एयरपोर्टहरू बीच सञ्चालन गरिरहेका छन्।
जापानका प्रमुख एयरपोर्टहरूको लागि, कृपया निम्न लेखहरूमा सन्दर्भ गर्नुहोस्:
नयाँ Chitose एयरपोर्ट होक्काइडोको सबैभन्दा ठूलो एयरपोर्ट हो। यो लगभग minutes० मिनेटको दूरीमा जेआर एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा सप्पोरो शहर केन्द्रबाट छ। यो एयरपोर्टसँग अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल र घरेलु टर्मिनलहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोमा सप्पोरो, निसेको, ओटारु इत्यादिको वरिपरि यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले नयाँ Chitose एयरपोर्ट प्रयोग गर्नुपर्छ। यस पृष्ठमा, म नयाँ Chitose एयरपोर्टको विवरण प्रस्तुत गर्दछु। म नयाँ Chitose एयरपोर्ट को रूपरेखा पहिले परिचय गर्दछु, त्यसपछि, म विदेशबाट धेरै पाहुनाहरु के जान्न चाहान्छु व्यक्तिगत रूपमा वर्णन गर्नेछु। सामग्रीको तालिकासम्मेरी नयाँ चिटोज एयरपोर्ट फ्लोर नक्शा द्वारा लिमोसिन बसहरू जेआर ट्रेन (न्यू चित्ज एयरपोर्ट स्टेशनबाट) भाडामा कार्न्यु चीटोज एयरपोर्टबाट ससेपोरो न्यू चीटोज एयरपोर्टको निसेको न्यु चीटोज एयरपोर्टबाट फुरानो शॉप्स र रेष्टुरेन्ट सारांश मर्मतकर्मीहरू जो एएनएको विमानमा छाडे = shutterstock एक अलग पृष्ठमा Google नक्सा प्रदर्शन गर्न क्लिक गर्नुहोस् न्यू Chitose एयरपोर्टसँग आन्तरिक उडानहरू बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलहरू छन्। त्यहाँ एयरपोर्टमा JR नयाँ Chitose एयरपोर्ट स्टेशन छ, यो साप्पोरोमा राम्रो पहुँच हो। एयरपोर्टमा भाडा कार कम्पनीहरूको काउन्टरहरू छन्। उनीहरूसँग काउन्टरमा एउटा रिसेप्शन डेस्क छ र पार्किंगमा नि: शुल्क बस। यदि तपाईं मिनामी चितोज स्टेशनमा जानुहुन्छ जुन जेआर न्यू चिटोज एयरपोर्ट स्टेशनबाट अगाडि एक स्टेसन हो तपाईं कुशिरो, ओबिहिरो इत्यादि जाने जेआर एक्सप्रेस ट्रेनमा पनि सवारी गर्न सक्नुहुनेछ। जेआर एक्सप्रेस ट्रेनबाट 40० मिनेटसम्म निसेकोमा २ घण्टा गाडीमा जान सकिन्छ। , २ घण्टा minutes० मिनेट - hours घण्टा minutes० मिनेट बस द्वारा (स्की रिसोर्टमा निर्भर गर्दै) अन्तर्राष्ट्रिय ...
नरिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जापानको टोकियोको हनेडा एयरपोर्ट पछाडि दोस्रो सबैभन्दा ठूलो एयरपोर्ट हो। हनिडा एयरपोर्टको साथ नारिता एयरपोर्ट टोकियो मेट्रोपोलिटन हब एयरपोर्टको रूपमा पूर्ण रूपमा परिचालनमा छ। यदि तपाईं टोकियो मा यात्रा गर्नुहुन्छ, तपाईं यी एयरपोर्टहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यस पृष्ठमा, म नरिता एयरपोर्टको बारेमा परिचय दिनेछु। नरिता एयरपोर्ट टोक्यो शहरको केन्द्रबाट धेरै टाढा छ, कृपया टोक्यो केन्द्रमा पहुँच जाँच गर्नुहोस्। सामग्री तालिका नरिता एयरपोर्ट वा हनेडा एयरपोर्ट? जापान रेल पासनरिट एयरपोर्ट टोकियो एक्सप्लोर टर्मिनल १, २, Nar नरीता एयरपोर्ट नरिटा एयरपोर्ट वा हनेडा एयरपोर्टमा प्राप्त गर्नुहुन्छ? टोक्यो नरिता एयरपोर्ट (NRT) मा जापान एयरलाइन्स (JL) बाट विमानहरू। नरिता जापान एयरलाइन्स (जेएल) र सबै निप्पोन एयरलाइन्स एएनए (एनएच) = शटरस्टक अन्तर्राष्ट्रिय उडान र एलसीसी बेसको लागि एक केन्द्र हो टोक्यो मेट्रोपोलिसको हनेडा एयरपोर्ट दक्षिणपश्चिम टोकियोमा रहेको छ र चिली प्रान्तको नरिता एयरपोर्ट हो। त्यहाँ केवल हनेडा एयरपोर्ट मात्र हुन्थ्यो, तर १ 1 s० को दशकमा जापानको आर्थिक विकास भयो र विमानका यात्रुहरूको संख्या द्रुत रूपमा बढ्यो। यस कारणले गर्दा, हनेडा एयरपोर्ट एक्लैले बढ्दो मागको सामना गर्न सकेन, र १23 मा नरिता एयरपोर्ट खोलियो। टोकियोको अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नारिता एयरपोर्टमा सारियो र हनेडा एयरपोर्टलाई घरेलु उडानका लागि एयरपोर्टको रूपमा लिइयो। जहाँसम्म, नरिता एयरपोर्ट टोकियोको सहरबाट 1960० किलोमिटर टाढा सीधा रेखा दूरीमा पनि छ। यो टोकियो मेट्रोपोलिसको हब एयरपोर्टको रूपमा धेरै टाढा छ। यस बीच, हनेडा एयरपोर्टमा, त्यहाँ उल्लेखनीय विस्तार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू आइपुग्दै र प्रस्थान गर्दै ...
हनेडा एयरपोर्ट टोकियो मेट्रोपोलिसको हब एयरपोर्ट हो। तपाईं जापान यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ एक अन्तर्राष्ट्रिय उडान द्वारा र हनेडा एयरपोर्टबाट प्रस्थान गर्दै। र तपाई हनेडा एयरपोर्टको प्रयोग गरेर जापानको वरिपरि घुम्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए यस पृष्ठमा म तपाईंलाई हनेडा एयरपोर्टको बारेमा उपयोगी जानकारी प्रस्तुत गर्नेछु। सामग्री सामग्री तालिका हनेडा एयरपोर्ट वा नरीटा एयरपोर्ट? अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल डोमेस्टिक टर्मिनल: टर्मिनल १ डोमेस्टिक टर्मिनल: टर्मिनल २ कहाँ जापान रेल पास हुन्छ? हनेडा एयरपोर्ट टोकियो (१) टोकियो मोनोरेलहानेडा एयरपोर्ट टोकियो (२) केिक्यू (केहिन्ह क्युको ट्रेन) हनेडा एयरपोर्ट टोकियो ()) बसने हनेडा एयरपोर्ट टोकियो ()) ट्याक्सीहरू रोयल पार्क होटल टोकियो हनेडा (अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल) हनेडा एक्सेल होटल टोकियु (डोमेस्टिक टर्मिनल २) पहिलो केबिन हनेडा टर्मिनल १ हनेडा एयरपोर्ट वा नरिता एयरपोर्ट? हनेडा एयरपोर्ट टोपियो केन्द्रको निकट नजिक छ नरिटा एयरपोर्ट भन्दा यात्रुहरू कतारमा उभिरहेका छन् र हनेडा एयरपोर्टको शटरस्टक आउटलाइन हनेडे एयरपोर्ट हनेदा एयरपोर्टको आधिकारिक नाम: टोकियो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट टोकियोको दक्षिणपश्चिमी भागमा जापानको सबैभन्दा ठूलो एयरपोर्ट हो। यो टोक्यो शहरको केन्द्रबाट १ 1 किलोमिटर टाढा छ। यो लगभग -०-2० मिनेट ट्रेन वा कार द्वारा हनेडा एयरपोर्टबाट टोकियो स्टेशनसम्म छ। हनेडा एयरपोर्ट, नरिता एयरपोर्ट (चिबा प्रान्त) सँगै, टोकियो मेट्रोपोलिसको हब एयरपोर्टको रूपमा भूमिका खेल्दछ। अहिले सम्म नरिता एयरपोर्ट एक एयरपोर्टको रूपमा विकसित भएको छ जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू आइपुग्छन् र प्रस्थान गर्छन्। अर्कोतर्फ, हनेडा एयरपोर्ट पूर्ण रूपमा एयरपोर्टको रूपमा सञ्चालन गरिएको छ जहाँ घरेलु उडानहरू आउँछन् र छुट्छन्। यद्यपि, हालसालै, हनेडा एयरपोर्ट धेरै विस्तार भएको छ। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन खोलियो। यसमा ...
जब तपाईं जापान जानुहुन्छ तपाईंसँग ओसाकामा एयरपोर्ट टोकियोको एयरपोर्टको अलावा प्रयोग गर्ने विकल्प हुन्छ। ओसाकासँग "कन्साई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट" छ जुन २ hours घण्टा अपरेट गर्दछ। यस पृष्ठमा, म यस एयरपोर्टको रूपरेखा र यस एयरपोर्टबाट क्योटो, ओसाका आदिको बारेमा कसरी जान्ने भनेर परिचय दिनेछु। कन्साईन्सको तालिका कन्साई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट (KIX) टर्मिनल १ टर्मिनल २ एयरो प्लाजा कसरी कन्साइ एयरपोर्ट कन्साइ एयरपोर्ट ओसाका, क्योटो, आदिमा JR रेल पास सक्रिय गर्ने केन्साई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपरेखा (KIX) कन्साई आन्तरिक एयरपोर्ट वा KIX दोस्रो ठूलो एयरपोर्ट हो। ओसाका सहर नजिकै अवस्थित जापान = शटरस्टक अलग पृष्ठमा कन्साइ एयरपोर्टको आधिकारिक वेबसाइट हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् पोइन्ट्स कन्साई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट जापानको अग्रणी विमानस्थलहरू मध्ये एक हो जुन कृत्रिम टापुमा अवस्थित छ, जुन ओसाका प्रान्तको दक्षिणी भागमा km किलोमिटर अपतटीय स्थित छ। यो अर्को साइडमा 24..1 किलोमिटर लम्बाइको पूलबाट जोडिएको छ। सडकहरू र रेलमार्गहरू यस पुलबाट भएर सर्छन्। यो ओसाका स्टेशनबाट लगभग kilometers० किलोमिटर टाढा छ। कन्साइ एयरपोर्ट र ओसाका शहर बीच, JR र Nankai ट्रेन संचालित छन्। कन्साइ एयरपोर्टमा त्यहाँ दुईवटा टर्मिनल भवनहरू छन्। टर्मिनल १ बाट तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू र नियमित एयरलाइन्सको घरेलू उडानहरूमा बोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। टर्मिनल २ बाट तपाईं LCC अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू र घरेलू उडानहरू बोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म, केहि LCC हरू टर्मिनल १ बाट आउँछन् र प्रस्थान गर्छन्। टर्मिनल २ टर्मिनल १ भन्दा धेरै असुविधाजनक छ, त्यसैले यदि तपाईं LCC प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि LCC छनौट गर्नुहोस् जुन टर्मिनल १ बाट छोड्छ।
जाल (जापान एयरलाइन्स)
सेतो र रातो जापान एयरलाइन्स (JAL) बोइंग 777 XNUMX ड्रीमलाइनर यात्री विमान टोकियोको लागि टोकियो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको टर्मिनल भवनमा टकअफको लागि तयार छन् = शटरस्टक
JAL जापान मा अग्रणी एयरलाइन कम्पनी हो। विगतमा त्यहाँ धेरै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू थिए, तर अब, जालले पनि तल वर्णन गरिएको रूपमा ठूलो संख्यामा घरेलु उडानहरू सञ्चालन गर्दछ।
JAL को आरक्षण / खरीद स्थान
JAL टिकटहरू बुक गर्न सकिन्छ र एयरपोर्टको JAL काउन्टर र ट्राभल एजेन्सीहरूमा खरीद गर्न सकिन्छ। एकै साथ तपाई JAL को आधिकारिक वेबसाइटमा बुक गर्न र खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
JAL ले वैदेशिक पर्यटकहरुका लागि तुलनात्मक रुपमा उचित टिकट बिक्री गर्दछ।
>> विदेशी पर्यटकहरूको लागि JAL को विशेष साइट यहाँ छ
>> JAL को टिकट आरक्षण / खरीद साइट यहाँ छ
अनुसूचित JAL उडानको साथ घरेलु एयरपोर्टहरू
अओमोरी एयरपोर्ट (अओमोरी प्रान्त)
मिसावा एयरपोर्ट (अओमोरी प्रान्त)
हानमाकी एयरपोर्ट (इवाटे प्रान्त)
यामगाता एयरपोर्ट (यामागाता प्रान्त)
सेंडाइ एयरपोर्ट (मियागी प्रान्त)
हनेडा एयरपोर्ट (टोकियो)
नरिता अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट (चिबा प्रान्त)
मत्सुमोटो एयरपोर्ट (नागानो प्रान्त)
निगाटा एयरपोर्ट (निगाता प्रान्त)
Shizuoka एयरपोर्ट (Shizuoka प्रान्त)
Chubu अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट (नागोया)
कन्साई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट (ओसाका)
ताजिमा एयरपोर्ट (टोयोका शहर, ह्योगो प्रान्त)
नानकी शिराहामा एयरपोर्ट (वाकायामा प्रान्त)
हिरोशिमा एयरपोर्ट (हिरोशिमा प्रान्त)
इजुमो एयरपोर्ट (Shimane Prefecture)
ओकी एयरपोर्ट (Shimane प्रान्त)
टोकुशिमा एयरपोर्ट (टोकुशिमा प्रान्त)
तकमात्सु एयरपोर्ट (कागवा प्रान्त)
कोची एयरपोर्ट (कोची प्रान्त)
मत्सुयामा एयरपोर्ट (एहिम प्रान्त)
फुकुओका एयरपोर्ट (फुकुओका प्रान्त)
Kitakyushu एयरपोर्ट (फुकुओका प्रान्त)
ओइटा एयरपोर्ट (ओइटा प्रान्त)
नागासाकी एयरपोर्ट (नागासाकी प्रान्त)
अमाकुसा एयरपोर्ट (नागासाकी प्रान्त)
मियाजाकी एयरपोर्ट (मियाजाकी प्रान्त)
कागोशिमा एयरपोर्ट (कागोशिमा प्रान्त)
Tanegashima एयरपोर्ट (कागोशिमा प्रान्त)
अमामी एयरपोर्ट (कागोशिमा प्रान्त)
टोकुनोशिमा एयरपोर्ट (कागोशिमा प्रान्त)
Okinoerabu एयरपोर्ट (कागोशिमा प्रान्त)
Kita Daito एयरपोर्ट
दक्षिण डाईटो एयरपोर्ट
सेना (सबै निप्पन एयरवेज)
सबै निप्पन एयरवेज (एएनए) B767-300 र B777-300 = शटरस्टक_452568229
सेनाको आरक्षण / खरीद स्थान
एएनए को लागी टिकटहरु ट्राभल एजेन्सीहरु र एएनएको टिकट काउन्टरहरुमा घरेलू एयरपोर्टहरुमा आरक्षित र किन्न सकिन्छ। एकै साथ तपाईं आधिकारिक एएनए साइटमा बुक गर्न र खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
सेनाले विदेशी पर्यटकहरूको लागि तुलनात्मक रूपमा उचित टिकटहरू पनि बिक्री गर्दछ।
>> विदेशी पर्यटकहरूका लागि एएनएको विशेष साइट यहाँ छ
>> सेनाको टिकट आरक्षण / खरीद साइट यहाँ छ
अनुसूचित सेना उडानको साथ घरेलू एयरपोर्ट
(मौसमी उडानहरू सहित)
अकिता उत्तर एयरपोर्ट (अकिता प्रान्त)
Shonai एयरपोर्ट (यामागाता प्रान्त)
फुकुशिमा एयरपोर्ट (फुकुशिमा प्रान्त)
हचिजोजिमा एयरपोर्ट (टोक्यो प्रान्तमा दुर्गम टापु)
तोयामा एयरपोर्ट (टोयामा प्रान्त)
नोटो एयरपोर्ट (ईशिकावा प्रान्त)
कन्साई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट (ओसाका प्रान्त)
तोतोरी एयरपोर्ट (तोटोरी प्रान्त)
योनागो एयरपोर्ट (तोटोरी प्रान्त)
इवामी एयरपोर्ट (Shimane Prefecture)
इवाकुनी एयरपोर्ट (यामागुची प्रान्त)
टोकुशिमा एयरपोर्ट (टोकुशिमा)
सागा एयरपोर्ट (सागा प्रान्त)
सुशीमा एयरपोर्ट (नागासाकी प्रान्त)
गोटो एयरपोर्ट (नागासाकी प्रान्त)
इकी एयरपोर्ट (नागासाकी प्रान्त)
जेट्स्टार हवाइजहाजले नरिता एयरपोर्ट = शटरस्टकमा प्रस्थानको लागि तयारी गर्दछ
जेस्टार जापानले जापानमा सब भन्दा ठूलो संख्यामा एलसीसी निर्धारित उडानहरू सञ्चालन गर्दछ। जेटस्टार जापानको JAL द्वारा पूंजी सहभागिता छ।
जेस्टार जापानले तीन एयरपोर्ट हब एयरपोर्टको रूपमा प्रयोग गर्दछ: नरिता एयरपोर्ट (टोक्यो), कन्साइ एयरपोर्ट (ओसाका), चुबु अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट (नागोया)।
आरक्षण / जेटस्टार जापानको खरीद ठाउँ
जेष्टार जापान टिकटहरू आरक्षित र तल आधिकारिक वेबसाइटमा खरीद गर्न सकिन्छ। कृपया सावधान रहनुहोस् किनकि LCC टिकटहरू रद्द गर्न गाह्रो छ।
>> जेस्टार जापानको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
अनुसूचित जेस्टार उडानको साथ घरेलु एयरपोर्ट
तीन एयरपोर्टको आधारमा, जेत्स्टारले तलका एयरपोर्टहरूको लागि निर्धारित उडानहरू गर्दैछ।
टोक्यो / नरिता बाट
कन्साइ एयरपोर्ट (ओसाका)
शिमोजिजिमा एयरपोर्ट (th० मार्च, २०१ 30 बाट)
नागोया / Chubu बाट
नयाँ Chitose एयरपोर्ट (होक्काइडो · सप्पोरो)
ओसाका / कन्साईबाट
नयाँ Chitose एयरपोर्ट (होक्काइडो सप्पोरो)
कन्च एयरपोर्ट, ओसाका, जापान = शटरस्टकमा पीच एयरलाइन
पीच एभिएसन एक एएनए ग्रुपको एलसीसी कम्पनी हो। यस कम्पनीले LC संचालन गर्दछ "पीच" नामको ब्रान्ड अन्तर्गत।
पीच कन्साइ एयरपोर्टमा आधारित छ (ओसाका)।
पीचको आरक्षण / खरीद स्थान
पीच टिकटहरू आरक्षित र तल आधिकारिक वेबसाइटमा खरीद गर्न सकिन्छ। कृपया सावधान रहनुहोस् किनकि LCC टिकटहरू रद्द गर्न गाह्रो छ।
>> पीचको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
अनुसूचित पीच उडानको साथ घरेलु एयरपोर्ट
पीचले कन्साइ एयरपोर्ट, सेन्दै एयरपोर्ट र फुकुओका एयरपोर्ट हब एयरपोर्टको रूपमा प्रयोग गर्दछ। पीचले यी एयरपोर्टहरूबाट तलका एयरपोर्टहरूमा नियमित उडानहरू सञ्चालन गर्दछ। पीचले नियमित उडानहरूको संख्या द्रुत रूपमा बढाइरहेको छ, त्यसैले कृपया पिचको आधिकारिक वेबसाइटमा भर्खरको जानकारी जाँच गर्नुहोस्।
नयाँ Chitose एयरपोर्ट (सप्पोरो)
कुशिरो एयरपोर्ट (कुशिरो शहर, होक्काइडो)
निगाटा एयरपोर्ट (निगाटा)
नरिता अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट (चिबा)
ईशिगाकी एयरपोर्ट (ओकिनावा)
जापान मा धेरै रेलमार्ग छन्। यहाँ, म Shinkansen बाहेक अरू नियमित ट्रेनहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्नेछु। जापानमा नियमित ट्रेन ज्यादातर जेआर ग्रुप र निजी रेलवेमा विभाजित छ।
जेआर पूर्वी जापान रेलवे कम्पनी द्वारा उच्च गतिको नरिता एक्सप्रेस अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट पहुँच ट्रेन (नेक्स) नेरिटा एयरपोर्टलाई मध्य टोकियो र योकोहामामा जोड्छ = शटरस्टक
जेआर एक रेलवे कम्पनी हो जुन जापानीको भूतपूर्व राज्यको स्वामित्वको रेलमार्ग विभाजित गरेर स्थापित गरिएको हो। यात्री रेलमार्गको सम्बन्धमा, निम्न कम्पनीहरूले तिनीहरूको सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा रेलहरू सञ्चालन गर्छन्। यदि तपाईं कुनै क्षेत्रमा JR ट्रेन सवारी गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया लागू JR कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्।
होक्काइडो रेलवे कम्पनी (JR Hokkaido)
अपरेशनको क्षेत्र (हरू)
होक्काइडो मा Hokkaidō Shinkansen
>> JR Hokkaido को आधिकारिक साइट
पूर्वी जापान रेलवे कम्पनी (JR ईस्ट)
तोहोकु, कान्टो, चुबुको अंशहरू (यामानशी, नागोनो, निगाता, तोयामा, ईशिकवा, फुकुई)
तोहोकु शिन्कानसेन, यामगाता शिन्कानसेन, अकिता शिन्कन्सेन, जोएत्सु शिन्कानसेन
JR West = Hokuriku Shinkansen को साथ
>> JR पूर्व को आधिकारिक वेबसाइट
मध्य जापान रेलवे कम्पनी (जेआर सेन्ट्रल)
Chubu को भाग (Shizuoka, Aichi, Gifu, Mie)
क्यान्टो र कन्साईमा टोकैडो Shinkansen
>> JR केन्द्रीय आधिकारिक साइट
पश्चिम जापान रेलवे कम्पनी (JR West)
केहि चुबु (तोयामा, ईशिकवा, फुकुई), कन्साई, चुगोकु, केहि कुशु
सान्यो Shinkansen कन्साई, Chugoku र क्युशु मा
JR ईस्ट साथ = Hokuriku Shinkansen
>> जेआर पश्चिमको आधिकारिक वेबसाइट
शिकोकू रेलवे कम्पनी (JR Shikoku)
>> JR Shikoku को आधिकारिक साइट
क्युशु रेलवे कम्पनी (जेआर क्यूशु)
क्युशु Shinkansen क्युशु मा
>> जेआर क्युशुको आधिकारिक वेबसाइट
जापान मा एक एक्सप्रेस ट्रेन Odakyu 'रोमान्स कार' = शटरस्टक
जापानको निजी रेलवे १ 15 प्रमुख निजी रेलमार्गमा विभाजित गरिएको छ जुन मुख्यतया टोकियो र ओसाका, र अन्य साना निजी रेलमार्गमा सञ्चालित छन्। फुर्सत यात्रा गर्दा, यो एक सानो रेलमार्ग प्रयोग गर्न रमाईलो हुन सक्छ। यद्यपि, यहाँ म तपाईंलाई प्रमुख प्राइभेट रेलवे प्रस्तुत गर्दछु जुन तपाईंले प्रयोग गर्नुहुनेछ।
१ Major प्रमुख निजी रेलवे
म पूर्व टोकिको क्रममा टोकियोमा आठ प्रमुख निजी रेलवे शुरू गर्दछु। प्रत्येक रेल नाममा क्लिक गर्नुहोस्, त्यो रेलमार्गको आधिकारिक वेबसाइट एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ।
केइसी रेलवेको ट्रेन मुख्य रूपमा चिबा प्रान्तमा सञ्चालित हुन्छ। तपाईं यो ट्रेन नरिता एयरपोर्ट र टोकियोको शहर बीचको बीच पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
टोवु रेलवे कान्टो क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो निजी रेल हो। टोक्यो शहरको केन्द्रबाट निक्को जाने बखत तपाईं यो ट्रेन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
Seibu रेलवे पश्चिमी टोक्यो मा संचालित छ। तपाईं यो ट्रेन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं सैतामा प्रान्तको चिचिबुमा जानुहुन्छ।
केियो रेलवेले टोक्योको शिन्जुकुबाट हचियोजी र माउन्टसम्म रेलहरू सञ्चालन गर्दछ। पश्चिममा टाकाओ। यो ट्रेन प्रयोग गर्न सजिलो छ जब तपाईं माउन्टमा जानुहुन्छ। टाकाओ।
टोक्यो रेलवेले टोकियोको दक्षिणपश्चिमी भागमा रेलहरू सञ्चालन गर्दछ। तपाईं यो ट्रेन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं टोकियोको शिबुयाबाट योकोहामा जानुहुन्छ।
ओडाक्यू रेलवेले टोकियोको शिन्जुकुबाट एनोशिमा, ओडवारा र हाकोन सम्म रेलहरू सञ्चालन गर्दछ। तपाईं यो ट्रेन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं यी दृश्यहरूमा जानुहुन्छ। ओडाक्यू रेलवे सीमित एक्सप्रेस "रोमान्स कार" जापानको निजी रेलको प्रतिनिधित्व गर्ने एक सुन्दर रेल हो, जुन माथिका फोटो र भिडियोहरूमा देखाइन्छ।
सोटेत्सु (सगामी रेलवे)
Sotetsu योकोहामामा आधारित कानागावा प्रान्तमा रेलहरू सञ्चालन गर्दछ।
केिक्यू (केहिन्ह क्युकोरेलवे)
केिक्यू टोक्योबाट कानगावा प्रान्तको तटीय क्षेत्रसम्म रेलहरू सञ्चालन गर्दछन्। जब तपाई हनेडा एयरपोर्ट जानुहुन्छ, तपाईं यस ट्रेन वा टोकियो मोनोरेल प्रयोग गर्नुहुनेछ।
टोकई क्षेत्र (आसपास नागोया)
Meitetsu लिमिटेड एक्सप्रेस जापान मा टोयोहाशी लाइन मा यात्रा। Meitetsu Panorama एक्सप्रेस ट्रेन = शटरस्टक
मीटेत्सु (नागोया रेलवे)
मीटेत्सुले आइची प्रान्त र जीफु प्रान्तमा रेलहरू सञ्चालन गर्दछ। यो ट्रेन प्रयोग गर्न सजिलो छ जब तपाईं Inuyama महल वा Gifu शहर जानुहुन्छ।
किन्तेत्सु (किंकी निप्पोन रेलवे)
किन्तेत्सु मुख्यत: ओसाकामा रेलहरू सञ्चालन गर्दछ, तर यसै समयमा यसले नागोया स्टेशनबाट माई प्रान्तसम्म इसे शिमासम्म रेलहरू पनि चलाउँछ। किन्टेत्सुको बारेमा, म यसलाई तल कन्साई क्षेत्रमा परिचय दिनेछु।
Kintetsu एक्सप्रेस "Hamakaze" = AdobeStock
किन्तेत्सु जापानको सब भन्दा ठूलो निजी रेल हो। यसले ओसाका प्रान्त, नारा प्रान्त, क्योटो प्रान्त, माई प्रान्त, आइची प्रान्तमा रेलहरू सञ्चालन गर्दछ। किन्टेत्सुले ओसाका, क्योटो, नारा, इसे शिमा, नागोया जस्ता अद्भुत पर्यटन स्थलहरू जोड्दछ। यदि तपाईं जापान मा निजी रेल यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ भने, म किन्तेत्सुलाई पहिले सिफारिस गर्दछु।
नानकाई कन्साई क्षेत्रको दक्षिणी भागमा एक प्रमुख निजी रेल हो। यसले ओसाका शहरलाई कन्साइ एयरपोर्टसँग जोड्दछ। ओसाका शहरबाट कोयासन जाँदै गर्दा तपाईं ननकाई पनि प्रयोग गर्नुहुनेछ।
कीहान एक निजी रेलमार्ग हो जुन ओसाका शहर र क्योटोलाई जोड्दछ। जब तपाईं क्योटोको दर्शनीय स्थलहरूमा जाँदै हुनुहुन्छ, पनि सबवेबाहेक केहान प्रयोग गर्न पनि सुविधाजनक हुनेछ।
हन्कियु रेलवे एक ठूलो निजी रेलवे हो जुन किन्तेत्सुको साथमा कन्सई क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसले निम्न हन्शीन रेलवे पनि मर्ज गर्‍यो। हंक्यायो क्योटो, टकाराजुका र कोबेलाई ओसाकामा उमेडामा जडान गर्दछ। यसले शाखा शाखा पनि चलाउँछ जुन क्योटो शहरमा अरशिअमामा जान्छ।
हन्शिन एक निजी रेल हो जुन ओसाकाको उम्मेद र कोबे लाई जोड्दछ। यसले भर्खरै हन्शीन नाम्बा लाइन खोल्छ जुन ह्योगो प्रान्तको अमागासाकीबाट दक्षिणी ओसाकाको नाम्बा सम्म जान्छ। तपाईं Namba बाट कोबे रेल बाट जान सक्नुहुन्छ।
Nishitetsu रेलवे सीमित एक्सप्रेस ट्रेन, जापान = AdobeStock
Nishitetsu (Nishi-Nippon रेलमार्ग)
Nishitetsu फुकुओका शहर मा आधारित एक निजी रेल हो। तपाईं यो ट्रेन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं फुकुओका शहरबाट डाजाइफु जानुहुन्छ।
सिफारिश गरिएको भिडियो: जापानी ट्रेन स्टेशन र टिकटहरू प्रस्तुत गर्दै
टोक्योमा = एयरपोर्ट स्थानान्तरण बस = शटरस्टक
टोक्यो = शटरस्टकमा एउटा बस स्टपमा बस पर्खन्छ
सिफारिस गरिएका खोज साइटहरू
जापानमा, बसहरू विभिन्न स्थानहरूमा सञ्चालन हुन्छन्। यदि तपाईं जापानमा बस लिनुभयो भने, तपाईंले निम्न दुई साइटहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यस साइटमा, तपाईं विभिन्न राजमार्ग बसहरू र यात्रा बसहरूको लागि खोजी गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं यस साइटमा विभिन्न राजमार्ग बसहरू पनि खोज्न सक्नुहुनेछ।
एयरपोर्ट स्थानान्तरण बसहरू (लिमोसिन बसहरू)
तपाईं एयरपोर्ट स्थानान्तरण बस प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं एयरपोर्टबाट डाउनटाउन आदि जानुहुन्छ। टोकियो र ओसाका जस्ता एयरपोर्टहरूमा, धेरै विविध मार्गहरूको साथ एयरपोर्ट स्थानान्तरण बसहरू सञ्चालन हुन्छन्। धेरै जसो अवस्थाहरूमा, एयरपोर्टमा बसको लागि टिकट कार्यालयहरू वा टिकट भेन्डि machines मेशिनहरू छन्। पहिले टिकट खरीद गरेपछि बसमा चढ्नुहोस्!
यदि तपाईं एयरपोर्टबाट शहर पुग्नुभयो भने, तपाईं निर्धारित बस प्रयोग गर्नुहुनेछ। त्यहाँ दुई किसिमका निर्धारित बसहरू छन्: तपाईले सवारी गर्दा भुक्तानी गर्दा र भुक्तानी गर्दा जब तपाईं छुट्नुहुनेछ। कुनै पनि केसमा पहिले पैसा तयार गरौं। यदि तपाईंसँग सिक्का छ भने यो वांछनीय हो, तर तपाईं एक हजार येन बिलको साथ माछा मार्न सक्नुहुन्छ। टोक्यो र ओसाका जस्ता प्रमुख शहरहरूमा, तपाईं रेलमा सवारी गर्दा प्रयोग गर्नका लागि प्रीपेड कार्डहरू मार्फत पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ।
जहाँसम्म, यदि तपाईं बसको तर्फबाट ट्रेन लिन सक्नुहुन्छ भने, म ट्रेन प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छु। किनकि जापानमा बस मार्गहरू सामान्यतया जटिल हुन्छन्। थप रूपमा, बसहरूको मामलामा ट्राफिक जामको खतरा छ। जब तपाईं क्योटोमा उच्च मौसमको समयमा बसमा जानुहुन्छ, यातायात जाम डरलाग्दो हुन्छ।
जापानमा, धेरै राजमार्ग बसहरू (लामो दूरीको बसहरू) टोकियो जस्ता प्रमुख शहरहरू देखि दर्शनीय स्थलहरूमा जाने छन्। यदि तपाईं यी बसहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं कुनै परिवर्तन नगरिकन गन्तव्यमा जान सक्नुहुनेछ। यद्यपि रेलहरू जस्तो नभई बसहरू ट्राफिक जामको जोखिममा छन्। विशेष गरी, अप्रिलको अन्त्यदेखि मेको सुरुवातसम्म, अगस्टको मध्य, वर्ष अन्त्य र नयाँ वर्षको बिदा, सडक धेरै भीडको हुन सक्छ, त्यसैले सावधान रहनुहोस्।
जापान मा धेरै यात्रा बस छन्। माथिको माथिका दुई साइटहरुमा कृपया उपयुक्त टुर बस पत्ता लगाउनुहोस्।
मैले टुर रिजर्भेसन आदिमा पनि निम्न लेखहरू लेखें। यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने, यस पृष्ठमा पनि ड्रप गर्नुहोस्।
JPN ट्याक्सी भनिने जापानी ट्याक्सीको नयाँ मोडलले ओलम्पिक २०२० पर्यटन बूमका लागि तयार क्याबहरू र अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभरहरू = शटरस्टकको साथ तयारी गर्दछ
टोकियो र क्योटो जस्ता सहरी क्षेत्रहरूमा, तपाईं ट्याक्सी चढ्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंले चलिरहेको ट्याक्सीतिर हात उठाउनुभयो भने। ट्याक्सीहरू स्टेशनहरू र ठूला होटेलहरूको सामु लाइनमा उभिन्छन्। तपाईं यसलाई सवारी गर्न सक्नुहुन्छ।
ट्याक्सी ढोका स्वत: खुल्छ र बन्द हुन्छ। जापानी ट्याक्सी चालकहरूको आतिथ्यको हृदय छ। धेरै ट्याक्सी चालकहरू अ at्ग्रेजीमा राम्रो छैनन्। तर तीनिहरु तपाईको गन्तव्य ईमानदारीसाथ बुझ्न कोशिस गर्छन्। यदि तपाईं कागजमा तपाईंको गन्तव्य ठेगाना लेख्नुभयो भने, ड्राइभरले यसलाई अंग्रेजीमा पनि बुझ्दछ। प्राय: ट्याक्सीहरू नेभिगेसन प्रणालीसँग सुसज्जित छन् त्यसैले ड्राइभरहरूले तपाईंलाई कुनै समस्या बिना तपाईंको गन्तव्यमा लैजान्छन्।
ट्याक्सीको मामलामा जहाँ पछाडि सीटको विन्डोमा क्रेडिट कार्ड चित्रण स्थापित हुन्छ, तपाईं क्रेडिट कार्ड पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जापानमा, हामीलाई ट्याक्सी ड्राइभरहरूको लागि चिप्स आवश्यक पर्दैन।
जापानमा ट्याक्सी भाडा सामान्यतया बढी हुन्छ। यदि तपाईं आफ्नो मार्गको बीचमा भीडभाड हुनुहुन्छ भने ट्याक्सी भाडा अझ बढी हुनेछ। अग्रिम रूपमा कुनै नराम्रो ट्याक्सी शुल्क थाहा पाउनको लागि, निम्न साइट उपयोगी छ। टोक्योमा केवल शुल्क यस साइटमा खोजी गर्न सकिन्छ। तर तपाई यस साइटले जापानी ट्याक्सी भाडाको कच्चा मूल्य बुझ्न सक्नुहुनेछ। क्षेत्रीय ट्याक्सी भाँडा प्रायः टोकियो भन्दा सस्तो हुन्छ।
>> टोक्योमा ट्याक्सी भाँडा खोजी गर्न सक्ने वेबसाइट यहाँ छ
यदि तपाईं जापानको देश तर्फ ट्याक्सी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं पहिल्यै जाँच गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं त्यस क्षेत्रमा ट्याक्सी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
ग्रामीण क्षेत्रमा तपाईले एयरपोर्ट वा मुख्य स्टेशनमा ट्याक्सी लिन सक्नुहुन्छ, तर अन्य ठाउँहरूमा तपाई ट्याक्सी पाउन सक्नुहुन्न। त्यहाँ धेरै मामलाहरुमा देशको साइटमा ट्याक्सी कम्पनीहरु पनि छन्। ती ट्याक्सी कम्पनीहरूले तपाईंलाई लिन्छ भने। जहाँसम्म ट्याक्सीहरूको संख्या थोरै हुन्छ, तपाइँ पर्खनु सक्नुहुन्छ।
जापानको देश तर्फ, ट्याक्सी कम्पनीहरूले प्राय: ट्याक्सी चलाउँछन् जब त्यस क्षेत्रका बुढापाकाहरू अस्पतालमा जान्छन् वा जस्तै। त्यसो भए तपाईले ट्याक्सीहरू त्यस क्षेत्रको अग्रिम अध्ययन गर्नु पर्छ।
देश तर्फ ट्याक्सी भाडा सहरी क्षेत्रहरु भन्दा सस्ता छ। यदि तपाईंको गन्तव्य टाढा छ भने, तपाईं ड्राइभरलाई तपाईंको गन्तव्य पनि बताउन सक्नुहुनेछ र शुल्कको लागि कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ।
टोकियोमा निप्पन भाँडा-ए-कार कार्यालय। निप्पन भाडा-ए-कार जापानमा सबैभन्दा पुरानो कार भाडा कम्पनी हो शटरस्टकमा
टोयोटा भाडा कार केन्द्रको फोटो एयर्पोर्टमा = शटरस्टकमा
जापानमा धेरै भाँडा-एक कार कम्पनीहरू छन्। यदि तपाईंसँग ड्राइभर इजाजतपत्र र अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभर इजाजतपत्र छ भने, तपाईं जापानमा कार भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ, म तिनीहरूको बारेमा एक सिंहावलोकन प्रस्तुत गर्नेछु।
कार भाडा कसरी प्रयोग गर्ने
जापानमा प्रमुख कार भाडा कम्पनीहरू र सस्तो कार भाडा कम्पनीहरू छन्। प्रमुख भाडा-एक-कार कम्पनीहरूले जापान भरका प्रमुख शहरहरूमा कार भाडा सेवाहरू प्रदान गर्दै छन्। सस्तो कार भाडा कम्पनीहरूले दर्शनीय स्थलहरूमा सेवाहरू सम्हाल्दै छन् जहाँ कार भाडाको लागि धेरै माग छ। यस बाहेक, टोकियो मा लक्जरी कार भाडा कम्पनीहरु छन्। कुनै पनि कम्पनीले इन्टरनेट वा फोन द्वारा अग्रिम आरक्षण गर्न सक्छ।
तपाईं तलको प्रक्रियामा भाँडा-एक कार सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
अग्रिम आरक्षण गर्नुहोस्
म सुझाव दिन्छु कि तपाईं भाँडा-कार-कार कम्पनी वा ट्राभल एजेन्सी साइटको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रि-बुक गर्नुहोस्। कृपया मिति र समय निर्दिष्ट गर्नुहोस् तपाईले प्रयोग गर्न चाहानु भएको शाखा, कारको प्रकार जुन तपाईले orrowण लिन चाहनुहुन्छ। आरक्षण गर्न धेरै केसहरूमा इन्टरनेटमा सदस्यको रूपमा दर्ता गर्नु आवश्यक हुन्छ।
भाडा कार कम्पनीको शाखामा जानुहोस्
हामी भाँडाका कार कम्पनीको शाखामा जाऔं तपाईले निर्दिष्ट गर्नुभएको मिति र समय। यदि सम्भव छ भने, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईले बताउनु भएको समय भन्दा १० मिनेट अगाडि तपाई जानुहोस्। शाखा काउन्टरमा कृपया तपाईंको नाम, ठेगाना आदि लिखित रूपमा लेख्नुहोस्। भाँडा-कारको लागि यो संभव भएमा नगदको सट्टा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ। अर्को, तपाइँ सापट लिनु भएको कारमा जानुहोस् र स्क्र्याचहरूको लागि कार जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाईं कार जाँच गर्नुभयो भने हामी हस्ताक्षर गरौं। अन्तमा, तपाईले स्टाफबाट साधारण लेक्चर पाउनुहुनेछ कि त्यो कार कसरी चलाउनुहुन्छ। यदि कुनै समस्या छैन भने सुरु गरौं।
यदि तपाईं ठूलो एयरपोर्टमा कार भाँडामा लिनुहुन्छ भने, प्राय: जसै एयरपोर्टको भुइँमा कार भाडाको काउन्टर हुन्छ। कृपया पहिले काउन्टरमा जानुहोस्। त्यसोभए स्टाफले तपाईंलाई शटल बसमा मार्गदर्शन गर्नेछ। तपाईं नजिकको शाखामा शटल बस लिनुहुनेछ।
तपाईले भाडा कार कम्पनीको शाखामा कारलाई फर्काउनु भएको मिति र समय द्वारा तपाइँले अग्रिम निर्दिष्ट गर्नुभयो। यदि तपाईं अग्रिम निर्दिष्ट गर्नुहुन्छ, तपाईं अर्को शाखामा कार पनि फिर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। जब तपाईं शाखामा पुग्नुहुन्छ, कर्मचारीहरूले पहिले कारको स्थिति जाँच गर्नेछन्। विशेष समस्या बिना, तपाईं शाखा छोड्न सक्नुहुन्छ।
मुख्य कार भाडा कम्पनीहरूको सिफारिश गरियो
मलाई लाग्छ कि जापानी प्रमुख कार भाडा कम्पनीहरूले सामान्यतया उच्च गुण सेवाहरू प्रस्ताव गर्दछ। ती मध्ये, म निम्न कम्पनीहरु सिफारिस गर्दछु। म यी कार भाडा कम्पनीहरूलाई सिफारिस गर्ने कारण यो हो, किनभने सबैभन्दा पहिले, उनीहरूको धेरै शाखाहरू छन्। दोस्रो, यी कम्पनीहरूमा, तपाईं कारको धेरै प्रकारका बीचबाट तपाईंको मनपर्ने कार रोज्न सक्नुहुन्छ।
कार भाडा कम्पनी जो म सिफारिस गर्न चाहन्छु पहिले निप्पन भाँडा - ए - कार हो। यस कम्पनीको फाइदा भनेको सबैभन्दा पहिले जापानभरि धेरै शाखाहरू छन्। दोस्रो, निप्पन भाडा-ए-कारमा तपाईं विभिन्न कार निर्माता कारहरूको बीचबाट आफ्नो मनपर्ने कार रोज्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो, यसले शहरी क्षेत्रहरूमा दिनको २ 24 घण्टा खुला शाखाहरूको संख्या बढाउँदैछ। म सधैं कम्पनीको वेबसाइटमा मैले मनपराएको कार पाउँछु। निप्पन भाडा-ए-कारमा, तपाईं मर्सिडीज र अडी जस्तो लक्जरी कार पनि भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ।
>> निप्पन भाडा-ए-कारको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
टोयोटा एक कार भाँडामा लिनुहोस्
टोयोटा भाडा कार एक टोयोटा समूह कम्पनी द्वारा चलाइएको कार भाडा सेवा हो। टोयोटा भाडा कारमा जापानभरि धेरै शाखाहरू छन्।
टोयोटा भाडामा पाउनु पर्ने कारहरू टोयोटाको कार हुन्। त्यो यस कम्पनीको कमजोर पोइन्ट हो। तपाईं टोयोटा बाहेक अन्य कारहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि टोयोटा गाडीहरू धेरै उच्च गुणको लागि प्रख्यात छन्। तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं केवल उच्च गुणहरूको कारहरू लिन सक्नुहुनेछ।
>> टोयोटा भाडाको कारको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
टाइम्स कार भाडा
टाइम्स कार भाँडा हीरोशिमा शहरमा रहेको प्रमुख भाडा कार कम्पनी द्वारा प्रबन्ध गरिएको छ। टाइम्स कार भाडा पहिले मज्दा द्वारा संचालित थियो। त्यसोभए, टाइम्स कार भाँडामा अझै मज्दा कारहरू छन्। एकै समयमा, त्यहाँ कारहरू पनि छन् टाइम्स कार भाडाको लागि मज्दा बाहेक।
म प्रायः यो भाडा कार प्रयोग गर्दछु। टाइम्स कार भाडाको लाभ यो हो कि, सबैभन्दा पहिले, तपाईं माथिका दुई कम्पनीहरूबाट बिभिन्न कारहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी माज्दाको कार हालै स्टाइलिश र लोकप्रिय छ। यो मज्दा कार चलाउन को लागी रमाईलो छ। दोस्रो, टाइम्स कार भाडाको लागि भाडा शुल्क अपेक्षाकृत उचित छ। मलाई लाग्छ कि टाइम्स कार भाडा प्रयोग गर्न यो खराब विचार होइन।
>> टाइम्स कार भाडाको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ